IPanasonic Lumix GH5S, ikhamera engenasipili, ividiyo ye-4k kunye ne-ISO engama-51.200 | Iindaba zeGajethi
Kwaye siyaqhubeka nokuthetha ngeendaba zokuba ezi ntsuku zenziwa kwi-CES ebanjelwe omnye unyaka eLas Vegas. Ngoku lithuba lomvelisi waseJapan uPanasonic, othe ngokusebenzisa uluhlu lweLumix, ukwazile ukwenza into ebalulekileyo kwintengiso. Imodeli yakutshanje eyenziwe yinkampani yi-GH5S, ikhamera enika inqanaba le-ISO elifikelela kuma-51.200, ngaphandle kokuba ne-ISO eyandisiweyo, enkosi kwisenzi esitsha esidibanisa le modeli yePanasonic. Inzwa ebandakanya i-GH5S Inesisombululo se-10 mpx, kwaye ijolise kubuchwephesha bevidiyo.
Ngokwenkampani uqobo, le khamera isinika ezona mvakalelo ziphambili kunye nomgangatho kunye nomgangatho wevidiyo kunayo nayiphi na enye imodeli evela kwinkampani yaseJapan. Inkqubo ye- ukurekhoda kunye / okanye iifomathi zokubamba ezibonelelweyo zezi: 4: 3, 17: 9, 16: 9 no-3: 2 ke ngoku ukuziqhelanisa nazo zonke izigqibo ezinokuthi zifunwe ziingcali zevidiyo ngaxa lithile. Ukongeza, isinika inkxaso ye-14-bit RAW kunye netekhnoloji ye-Dual Native ISO esetyenziselwa ukuphelisa ingxolo.
Ngokumalunga nesisombululo sokurekhoda, i-GH5S isinika inkxaso yokurekhoda kwi-4k kwi-60 fps, ukurekhoda kwi-4k kwi-30 fps 4: 2: 2: 2: 10 bits kunye ne-4: 2: 0 8 bits 4k kwi-60 fps. Ikwasinika ukurekhoda kwi-4: 2: 2: 2 10-bit 400 Mbps All-Intr Ain kwi-400 Mbps 4K 30p / 25p / 24p kunye ne-200 Mbps Yonke i-Intra kwi-HD epheleleyo. Le modeli isivumela ukuba sibhale phantsi zombini kwi-4k nakwisisombululo esipheleleyo se-HD, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwemida. Ukubamba ngokuhamba kancinci, le modeli iyasivumela irekhodi kwisisombululo esipheleleyo se-HD kwi-240 fps.
Ngokubhekisele kwizixhobo zokusebenza, ngaphakathi kwe-GH5S sifumana i-chip ye-bluetooth 4.1 kunye nonxibelelwano lwe-wifi eyi-802.11ac. Ngaphandle kwegumbi lenziwe nge ingxubevange yemagniziyam, iyamelana nothuli kunye nokutshiza kunye nokubanda. Isinika indawo ephindwe kabini ye-SD, i-HDMI yohlobo lwe-A port kunye nonxibelelwano lwe-USB-C. Inkqubo ye-autofocus, yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo, iyafana nemodeli yangaphambili, i-GH5, ke umahluko ophambili kunye nomanduleli wayo ufumaneka ekusebenzeni kwekhamera ekukhanyeni okuphantsi.
El Ixabiso le-GH5S liya kuba yi- $ 2.499sy kulindeleke ukuba ifike kwimarike ekupheleni kukaFebruwari.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IPanasonic Lumix GH5S, ikhamera engenasibuko, ividiyo ye-4k kunye ne-ISO engama-51.200